Manchester City Oo Heshiis Usoo Bandhigtay Lionel Messi – Garsoore Sports
Manchester City Oo…
Kooxda Kubadda-cagta ee Manchester City ayaa u soo bandhigtay Lionel Messi heshiis saddex sano ah, iyadoo labada sano ee ugu horreysa uu ku cayaari doono Manchester City halka sannadka ugu dambeeya uu ciyaari doono kooxda MLS-ka ee New York City.
Waxaa la shaaciyay habeenimadii khamiista in Messi hubaashii uusan heshiis cusub u saxiixi doonin Barcelona, iyadoo kooxda La Liga ka dhisan ay sheegtay inaysan awoodin inay xiddigan sii heystaan arrimaha maaliyadeed ee
Kooxda Kubadda Cagta ee City ayaa u soo bandhigtay Lionel Messi heshiis saddex sano ah, iyadoo labada sano ee ugu horreysa lagu ciyaari doono Manchester City halka sannadka ugu dambeeya lagu ciyaari doono kooxda MLS ee New York City.
Waxaa la shaaciyay habeenimadii khamiista in Messi hubaal uusan heshiis cusub u saxiixi doonin Barcelona, iyadoo kooxda La Liga ka dhisan ay sheegtay inaanay awoodin inay xiddigan heshiiska u kordhiso arrimo dhaqaale aawadeed.
Warar si hoose loo helay ayaa soo jeedinaya in tababaraha City Pep Guardiola uusan xiiseyneynin inuu dib ula midoobo xiddiga reer Argentina, taasoo ka dhigeysa Paris Saint-Germain inay tahay kooxda ugu cadcad inay hesho saxiixa xiddiga ku guuleystay Ballon d’Or lix jeer.
In kasta oo dhowaan ay City xaqiishisay imaanshiyaha Jack Grealish ee haddana warka ah in Guardiola uusan xiiseyneynin inuu u dhaqaaqo Messi ayaa noqday wax aad loola yaabay marka la eego waqtigii quruxda badnaa ee ay labadoodu ku wada qaateen Barcelona.
Waxayna hadda u muuqataa in City ay dhab ahaantii doonayso inay ku biirto loolanka loogu jiro saxiixa Messi, iyadoo Le 10 Sport ay warinayso in Kooxaha Kubbada-cagta Ee City ay u soo bandhigtay kabtankii hore ee Barcelona heshiis saddex sano ah.
Haddii heshiiska la aqbalo, Messi waxaa qandaraas lagu siin doonaa Manchester City labada sano ee ugu horreysa kahor inta uusan u sannadka u harsan u dhaqaaqin horyaalka Mareykanka ee MLS-ka halkaasoo qorshuhu yahay inuu ku biiro kooxda kale ee bahwadaagga la ah Manchester City ee New York City FC.
Sida caadiga ah City ayaa wajihi doonta loolan adag oo ay kula soo saxiixaneyso Messi haddii xiisahoodu uu dhab yahay, iyadoo Messi durbaba la sheegay inuu wadahadalo kula jiro kooxda PSG islamarkaan xiriir uu la sameeyay tababaraha ay isku wadanka yihiin ee kooxdaasi Mauricio Pochettino.
Varane & Sancho Oo Seegaya Kulanka Furitaanka Premier League-ga